म्यानमारमा प्रदर्शनकारीमाथि गोलि प्रहार, ४ बालबालिकासहित ३८ को मृत्यु - Lekhapadhi.com मुख्य समाचार : Lekhapadhi.com lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २० फाल्गुन २०७७, बिहीबार १३:०५ मा प्रकाशित
एजेन्सी- फेब्रअरी १ मा सेनाले सत्ता लिएपछि म्यान्मारमा दिनप्रतिदिन अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । कूमार्फत् सत्ता हत्याएको म्यानमारको सेनाले प्रदर्शनकारीमाथि दमन बढाएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार बुधबारमात्रै सेना र प्रहरीले चलाएको गोली लागे कम्तिमा ३८ जनाको मृत्यु भएको छ। फेब्रुअरी १ मा सेनाले सत्ता हत्याएपछि भएका प्रदर्शनमा एकैदिन यति धेरै मानिस मारिएको यो पहिलो पटक हो। मृत्यु हुने ४ जना बालबालिकासमेत रहेको जनाइएको छ।
आज सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण दिन भयो। आजमात्र ३८ मानिसले ज्यान गुमाए। कूपछि अहिलेसम्म ५० बढी मानिस मारिएका छन् र कैयौं घाइते भएका छन्,’ म्यानमारका लागि संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवकी विशेष प्रतिनिधि क्रिस्टिन स्च्रानर बर्जनरले भनिन्।
म्यानमारका छिमेकी देशहरूले जुन्ता सरकारलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेकै अर्को दिन सुरक्षाकर्मीहरूले देशका विभिन्न सहरमा प्रदर्शनकारीमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाएका हुन्।
‘यो निकै डरलाग्दो छ, यो नरसंहार हो। यहाँको अवस्था र हाम्रो भावना अभिव्यक्त गर्ने कुनै शब्द छैन,’ एक जना युवा प्रदर्शनकारीले समाचार संस्था रोयटर्ससँग भनेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति पदका विजेता जो बाइडन को हुन ?: अमेरिका निर्वाचन २०२० परिणाम
म्यानमार सैनिक ‘कू’ बिरुद्ध सेनालाई अमेरिकी रास्ट्रपति बाइडनको कडा चेतावनी
म्यानमार सडकमा सेनाका बख्तरबन्द गाडीहरु, इन्टरनेट सेवा बन्द
A demonstrator holds up an image of Aung San Suu Kyi duringaprotest outside the Embassy of Myanmar in Bangkok, Thailand, on Monday, Feb. 1 2021. Myanmar's military detained Suu Kyi, declaredastate of emergency and seized power forayear after disputing her partys landslide November election victory inasetback for the country's nascent transition to democracy. Photographer: Andre Malerba/Bloomberg
अदालतको भिडियोमा देखा परिन् सुकी, पुनः नयाँ अभियोग
म्यानमारमा प्रदर्शनकारीमाथि सेनाको चर्को दमन, आज ९ जनाको मृत्यु